Ny Fotopampianarana sy Fanekempihavanana
1–7, Miantefa amin’ny olon-drehetra ny feo fampitandremana; 8–16, Mialoha ny Fiaviana Fanindroany ny Apôstazia sy ny faharatsiana; 17–23, Nantsoina mba hamerina indray ny fahamarinana sy ny herin’ny Tompo eto an-tany i Joseph Smith; 24–33, Navoaka ny Bokin’i Môrmôna ary naorina ny Fiangonana marina; 34–36, Hoesorina eto an-tany ny fiadanana; 37–39, Diniho ireo didy ireo.
1, Hanambara ny fisoronana i Elia; 2–3, Ambolena ao am-pon’ny zanaka ny fampanantenan’ny ray.
1–4, Hodina mandrakizay ny lalan’ny Tompo; 5–15, Tsy maintsy mibebaka i Joseph Smith fa raha tsy izany dia mamery ny fanomezam-pahasoavana handika teny; 16–20, Mivoaka ny Bokin’i Môrmôna mba hamonjena ny taranak’i Lehia.
1–4, Mamonjy ny mpanompon’ny Tompo ny fanompoana amin-kafanam-po; 5–6, Ny toe-panahy araka an’ Andriamanitra no mahalany azy ireo ho amin’ny asa fanompoana; 7, Tokony hokatsahina ny zavatr’ Andriamanitra.
1–10, Handray ny tenin’ny Tompo amin’ny alalan’i Joseph Smith ity taranaka ity; 11–18, Hanambara ny amin’ny Bokin’i Môrmôna ny vavolombelona telo; 19–20, Ho voamarina toy ny tamin’ny fotoana tany aloha ny tenin’ny Tompo; 21–35, Afaka mibebaka i Martin Harris ary ho tonga anankiray amin’ireo vavolombelona.
1–6, Mahazo ny famonjena ireo mpiasa ao amin’ny sahan’ny Tompo; 7–13, Tsy misy fanomezam-pahasoavana lehibe kokoa noho ny fanomezana ny famonjena; 14–27, Tonga amin’ny alalan’ny herin’ny fanahy ny vavolombelon’ny fahamarinana; 28–37, Banjino i Kristy ary manaova soa lalandava.
1–3, Ho velona i Jaona ilay lalaina mandra-piavin’ny Tompo; 4–8, Mihazona ny fanalahidin’ny filazantsara i Petera, i Jakoba ary i Jaona.
1–5, Tonga amin’ny herin’ny Fanahy Masina ny fanambarana; 6–12, Ny fahalalana ny amin’ny misterin’ Andriamanitra sy ny fahefana handika ireo rakitsoratra tranainy dia tonga amin’ny alalan’ny finoana.
1–6, Mbola tokony hadika ireo rakitsoratra tranainy hafa; 7–14, Nadika tamin’ny alalan’ny fandinihana sy tamin’ny fanamafisan’ny Fanahy ny Bokin’i Môrmôna.
1–26, Mambosy ireo olon-dratsy i Satana mba hanohitra ny asan’ny Tompo; 27–33, Katsahiny ny hamongotra ny fanahin’ny olona; 34–52, Handeha any amin’ny Lamanita sy ny firenena rehetra ny filazantsara amin’ny alalan’ny Bokin’i Môrmôna; 53–63, Hanorina ny Fiangonany sy ny filazantsarany eo anivon’ny olona ny Tompo; 64–70, Hangoniny ao amin’ny Fiangonany ny mibebaka ary hovonjeny ny mankatò.
1–6, Hahazo ny famonjena ireo mpiasa ao amin’ny tanimboaloboka; 7–14, Mikatsaha fahendrena, mitoria fibebahana, matokia ny Fanahy; 15–22, Tandremo ireo didy ary diniho ny tenin’ny Tompo; 23–27, Aza mandà ny fanahin’ny fanambarana sy ny an’ny faminaniana; 28–30, ireo izay mandray an’i Kristy dia tonga zanak’ Andriamanitra.
1–6, Handray famonjena ireo mpiasa ao amin’ny tanimboaloboka; 7–9, Izay rehetra maniry sy afa-manao dia afaka manampy amin’ny asan’ny Tompo.
Fanazavana ny fanalahidy sy ny fahefana amin’ny Fisoronana Aharôna.
1–6, Hahazo famonjena ireo mpiasa ao amin’ny tanimboaloboka; 7–8, Ny fiainana mandrakizay no lehibe indrindra amin’ny fanomezam-pahasoavan’ Andriamanitra; 9–11, Nahary ny lanitra sy ny tany i Kristy.
1–2, Manerana izao tontolo izao ny sandrin’ny Tompo; 3–6, Ny fitoriana ny filazantsara sy ny famonjena fanahy no zavatra manan-danja indrindra.
1–4, Amin’ny finoana no hahitan’ny Vavolombelona Telo ireo takelaka sy ireo zavatra masina hafa; 5–9, Vavolombelona manambara ny maha-avy amin’ Andriamanitra ny Bokin’i Môrmôna i Kristy.
1–5, Asehon’ny soratra masina ny fomba anorenana ny Fiangonana; 6–8, Mihamasaka ao amin’ny faharatsiana izao tontolo izao; 9–16, Lehibe ny hasarobidin’ny olona; 17–25, Tsy maintsy mitondra ny anaran’i Kristy ny olona mba hahazo famonjena; 26–36, Fanambarana ny antso sy ny asa fitorian’ny Roambinifololahy; 37–39, Tsy maintsy mitady ireo Roambinifololahy i Oliver Cowdery sy i David Whitmer; 40–47, Tsy maintsy mibebaka, atao batisa ary mitandrina ireo didy ny olona, mba hahazoany famonjena.
1–3, Manana ny fahefana rehetra i Kristy; 4–5, Tsy maintsy mibebaka na mijaly ny olon-drehetra; 6–12, Famaizana mandrakizay ny famaizan’ Andriamanitra; 13–20, Nijaly ho an’ny rehetra i Kristy mba tsy hahatonga azy ireo hijaly raha mibebaka; 21–28, Torio ny filazantsaran’ny fibebahana; 29–41, Ambarao ny vaovao mahafaly.
1–16, Ny bokin’i Môrmôna dia manaporofo ny maha-avy amin’ Andriamanitra ny asan’ny andro farany; 17–28, Nohamafisina ny fotopampianarana momba ny fahariana, ny fahalavoana, ny sorompanavotana ary ny batisa; 29–37, Nomena ny lalàna mifehy ny fibebahana, ny fanamarinana, ny fanamasinana ary ny batisa; 38–67, Famintinana ny andraikitry ny loholona, ny mpisorona, ny mpampianatra ary ny diakona; 68–74, Fanambarana ny andraikitry ny mpikambana, ny fitsofan-drano ny ankizy ary ny fomba fanaovana batisa; 75–84, Fanomezana ireo vavaka amin’ny Fanasan’ny Tompo sy ny fitsipika mifehy ny maha-mpikambana ao amin’ny Fiangonana.
1–3, Nantsoina ho mpahita ho mpandika teny ho mpaminany ho apôstôly ary ho loholona i Joseph Smith; 4–8, Hitarika ny foto-kevitr’i Ziona ny teniny; 9–12, Ireo olomasina dia hino ny teniny izay teneniny amin’ny alalan’ny Mpampionona.
1, Fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny batisa; 2–4, Takiana ny batisa ombam-pahefana.
1–7, Nantsoina hitory, hanentana ary hampahery ny Fiangonana ireo mpianatra voalohany ireo.
1–9, Nantsoina mba handika teny, hitory ary hamelabelatra ny soratra masina i Joseph Smith; 10–12, Nantsoina mba hitory ny filazantsara i Oliver Cowdery; 13–19, Nambara ny lalàna mikasika ny fahagagana, ny fanozonana, ny fanintsanana ny vovoka amin’ny faladia ary ny fandehanana tsy miaraka amin’ny kitapom-bola na kitapom-batsy.
1–6, Emma Smith, izay vehivavy nofinidy, dia nantsoina hanampy sy hampahery ny vadiny; 7–11, Nantsoina koa izy hanoratra, hamelabelatra ny soratra masina ary hifantina ireo hira; 12–14, Vavaka atao amin’ny Tompo ny hiran’ny olo-marina; 15–16, Azo ampiharina amin’ny rehetra ireo fitsipiky ny fankatoavana ato anatin’ity fanambarana ity.
1, Nodidiana izy ireo handinika sy hitory ny soratra masina; 2, Nambara ny lalàn’ny faneken’ny rehetra.
1–4, Hazavaina ireo marika ampiasaina amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo; 5–14, Handray ny fanasan’ny Tompo i Kristy sy ireo mpanompony avy amin’ny fotoampitantanana rehetra; 15–18, Itafio avokoa ny fiarovan-tena avy amin’ Andriamanitra.
1–7, Nihazona ny fanalahidin’ireo mistery i Joseph Smith, ary izy irery ihany no mandray fanambarana ho an’ny Fiangonana; 8–10, Tokony hitory amin’ny Lamanita i Oliver Cowdery; 11–16, Nofitahin’i Satana i Hiram Page ka nomeny fanambarana diso.
1–8, Manangona ny olom-boafidiny i Kristy; 9–11, Mampiditra ny arivotaona ny fiaviany; 12–13, Hitsara an’i Isiraely rehetra ny Roambinifololahy; 14–21, Hialoha lalana ny Fiaviany Fanindroany ny famantarana, ny areti-mandringana ary ny fandravana; 22–28, Handimby ny Arivotaona ny fitsanganana amin’ny maty sy ny fitsarana farany; 29–35, Ara-panahy ny zava-drehetra ho an’ny Tompo; 36–39, Noroahina hiala avy tany an-danitra ny devoly sy ny miaramilany mba haka fanahy ny olona; 40–45, Nitondra famonjena ny Fahalavoana sy ny Sorompanavotana; 46–50, Voavonjy amin’ny alalan’ny Sorompanavotana ny zaza.
1–4, Voalevilevy i David Whitmer noho ny tsy fahavarany nanompo tamin’ny fahazotoana; 5–8, Tokony handeha hiaraka amin’i Oliver Cowdery, amin’ny asa fitoriana any amin’ny Lamanita i Peter Whitmer zanany; 9–11, Voantso hitory ny filazantsara i John Whitmer.
1–6, Nantsoina mba hitory ny filazantsara i Thomas B. Marsh ary nahazo antoka ny amin’ny fiadanan’ny fianakaviany; 7–13, Nanarina izy mba hanam-paharetana, hivavaka mandrakariva ary hanaraka ny Mpampionona.
1–3, Voantso i Parley P. Pratt sy i Ziba Peterson hitory amin’ny Lamanita ary hiaraka amin’i Oliver Cowdery sy i Peter Whitmer zanany; 4–5, Tokony hivavaka izy ireo mba hahazoany ny soratra masina.
1–4, Antsoina hitory ny filazantsara ny mpiasa amin’ny ora fahiraika ambin’ny folo; 5–6, Voaorina ny Fiangonana ary tokony hangonina ny olom-boafidy; 7–10, Mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra; 11–15, Miorina eo amin’ny vatolampin’ny filazantsara ny Fiangonana; 16–18, Miomàna ho amin’ny fiavian’ny Mpampakatra.
1–4, Tonga zanak’ Andriamanitra amin’ny alalan’ny Sorompanavotana ireo mahatoky; 5–9, Manomana ny lalana ho amin’ny Fiaviana Fanindroany ny fitoriana ny filazantsara; 10–12, Tonga amin’ny alalan’ny herin’ny Fanahy Masina ny faminaniana.
1–2, Ny fomba mety hahatonga ny olona ho zanak’ Andriamanitra; 3–7, Nantsoina mba hanao batisa sy hanolotra ny Fanahy Masina i Sidney Rigdon; 8–12, Tanterahina amin’ny finoana ireo famantarana sy fahagagana; 13–16, Hively ireo firenena amin’ny herin’ny Fanahy ny mpanompon’ny Tompo; 17–19, Nihazona ny fanalahidin’ireo mistery i Joseph Smith; 20–21, Hahatanty ny andro hiavian’ny Tompo ny olom-boafidy; 22–27, Ho voavonjy i Isiraely.
1–3, Nametra-tanana tamin’i Edward Partridge tamin’ny alalan’ny tanan’i Sidney Rigdon ny Tompo; 4–8, Ny lehilahy tsirairay izay mandray ny filazantsara sy ny fisoronana dia hantsoina handeha sy hitory.
1–4, Nantsoina ny Olomasina hiangona ao Ohio.
1–6, Nahary ny zava-drehetra i Kristy; 7–8, Eo afovoan’ny Olomasiny izay hahita Azy tsy ho ela Izy; 9–12, Efa lo ny nofo rehetra eo anoloany; 13–22, Efa natokany ho an’ny Olomasiny mandritra ny fotoam-pahavelomana sy mandrakizay ny tanin’ny fampanantenana; 23–27, Nodidiana ny Olomasina mba ho iray sy hifampitondra toy ny mpirahalahy; 28–29, Voalaza mialoha ny hisian’ny ady; 30–33, Ny Olomasina dia homena fahefana avy any ambony ary handeha any anivon’ny firenena rehetra; 34–42, Nodidiana ny Fiangonana hikarakara ny mahantra sy ny sahirana ary hikatsaka ny haren’ny mandrakizay.
1–4, Manana ny hery ho tonga zanak’ Andriamanitra ny Olomasina; 5–6, Fandraisana an’i Kristy ny fandraisana ny filazantsara; 7–14, Nodidiana i James Covel mba hatao batisa ary hiasa ao amin’ny tanimboaloboky ny Tompo; 15–21, Tokony hitory ny filazantsara ireo mpanompon’ny Tompo mialoha ny Fiaviana Fanindroany; 22–24, Ireo izay mandray ny filazantsara dia hangonina amin’ny fotoam-pahavelomana sy mandrakizay.
1–3, Ny fahatahorana ny fanenjehana sy ny fiahiahiana izao fiainana izao no mahatonga ny fitsipahana ny filazantsara.
1–3, Hitondra ny Fiangonana amin’ny alalan’ny fanahin’ny fanambarana ireo loholona; 4–6, Handray sy hitandrina ny lalàn’ny Tompo ny mpianatra marina; 7–12, Notendrena ho evekan’ny Fiangonana i Edward Partridge.
1–10, Antsoina ireo loholona mba hitory ny filazantsara, hanao batisa an’ireo niova fo ary hanorina ny Fiangonana; 11–12, Tokony hantsoina sy hatokana izy ireo ary tokony hampianatra ny fitsipika ny filazantsara hita ao amin’ny soratra masina; 13–17, Tokony hampianatra sy haminany amin’ny herin’ny Fanahy izy ireo; 18–29, Didina ireo Olomasina tsy hamono olona, tsy hangalatra, tsy handainga, tsy hitsiriritra, tsy hanitsakitsa-bady na hiteny ratsy ny hafa; 30–39, Aroso etoana ny lalàna mifehy ny fanokanana fananana; 40–42, Melohina ny avonavona sy ny fidonanaham-poana; 43–52, Tokony hositranina amin’ny alalan’ny fametrahan-tanana sy ny finoana ny marary; 53–60, Mifehy ny Fiangonana ny soratra masina ary tokony hotoriana amin’izao tontolo izao; 61–69, Hambara ny toerana hisy an’i Jerosalema Vaovao sy ireo mistery momba ny fanjakana; 70–73, Tokony hampiasaina ho fanohanana ny mpitondra Fiangonana ireo fananana voatokana; 74–93, Aroso etoana ireo lalàna mifehy ny fijangajangana, ny fanitsakitsaham-bady, ny famonoana olona, ny halatra ary ny fibabohana amin’ny fahotana.
1–7, Amin’ny alalan’ilay efa voatendry ihany no ahatongavan’ireo didy sy fanambarana; 8–14, Hamasinina amin’ny fiasana amim-pahamasinana tanteraka eo anoloan’ny Tompo ny Olomasina; 15–22, Nirahina ny loholona hiantsoantso fibebahana sy hanomana ny olona ho amin’ny andro lehiben’ny Tompo; 23–28, Miantso ny olona amin’ny alalan’ny feony ihany sy amin’ny alalan’ny herin’ny voary ny Tompo; 29–35, Ho avy ny Arivotaona sy ny famatorana an’i Satana.
1–3, Tokony hivory amin’ny fihaonambe ny loholona; 4–6, Tokony hiorina araka ny lalàn’ny tany izy ireo ary hikarakara ny mahantra.
1–5, Kristy no mpisolovava antsika amin’ny Ray; 6–10, Ny filazantsara dia mpitondra hafatra manomana ny lalana eo anoloan’ny Tompo; 11–15, Noraisin’ny Tompo ho any Aminy i Enoka sy ireo rahalahiny; 16–23, Nambaran’ny Tompo ny famantarana ny amin’ny fiaviany tahaka izay nomeny teo an-tendrombohitra Oliva; 24–38, Haverina indray ny filazantsara, ho tanteraka ny fotoan’ny Jentilisa ary handrakotra ny tany ny areti-mandripaka; 39–47, Famantarana zava-mahatalanjona ary Fitsanganana amin’ny maty no hiaraka amin’ny Fiaviana Fanindroany; 48–53, Hijoro eo amin’ny Tendrombohitra Oliva i Kristy, ary ho hitan’ny Jiosy ny ratra eo amin’ny tanany sy ny tongony; 54–59, Hanjaka mandritra ny Arivotaona ny Tompo; 60–62, Nilazana ny Mpaminany mba hanomboka ny fandikana ny Testamenta Vaovao fa amin’ny alalan’izany no hampahafantarana vaovao lehibe; 63–75, Nodidina ireo Olomasina mba hivory ary hanorina an’i Jerosalema Vaovao izay any no hahatongavan’ny olona avy amin’ny firenen-drehetra.
1–2, Ny loholona no tokony hitondra ny fivoriana araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina; 3–6, Ireo tena mpikatsaka ny fahamarinana dia tsy tokony horoahana hiala amin’ny fivorian’ny fanasan’ny Tompo; 7–12, Angataho amin’ Andriamanitra ary katsaho ireo fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy; 13–26, Omena ny fitanisana ny sasany amin’ireo fanomezam-pahasoavana ireo; 27–33, Nomem-pahefana hamantatra ireo fanomezam-pahasoavan’ny Fanahy ny mpitondra ny Fiangonana.
1–4, Notendrena hirakitra ny tantaran’ny Fiangonana sy hanoratra ho an’ny Mpaminany i John Whitmer.
1–3, Tokony hifampizara ny taniny amin’ny rahalahiny ireo Olomasina ao Ohio; 4–6, Tokony hividy tany ireo Olomasina, hanorina tanàna ary hanaraka ny torohevitry ny filoha mpiahy azy ireo.
1–7, Ny andro sy ora hiavian’i Kristy dia hijanona ho zava-tsy fantatra ambara-piaviny; 8–14, Tsy maintsy mibebaka ny olona, mino ny filazantsara ary mankatò ny ôrdônansy mba hahazo famonjena; 15–16, Voatendrin’ Andriamanitra ny fanambadiana; 17–21, Ekena ny fihinanana hena; 22–28, Hiroborobo i Ziona ary hamony tahaka ny raozy ny Lamanita mialoha ny Fiaviana Fanindroany.
1–5, Miely patrana eto an-tany ireo fanahy sandoka maro; 6–9, Lozan’ireo mpihatsaravelatsihy sy ireo izay sarahina hiala amin’ny Fiangonana; 10–14, Tokony hitory ny filazantsara amin’ny alalan’ny Fanahy ireo loholona; 15–22, Samy ilaina hohazavaina amin’ny alalan’ny Fanahy na ny mpitory na ny mpihaino; 23–25, Izay tsy mampiorina dia tsy avy amin’ Andriamanitra; 26–28, Ireo mahatoky no tompon’ny zava-drehetra; 29–36, Valiana ny vavak’ireo nodiovina; 37–46, Kristy no Mpiandry Tsara sy Vatolampin’i Isiraely.
1–8, Notendrena hisahana ny fitantanan-draharaha sy ny fananana i Edward Partridge; 9–12, Tokony hitondra tena amim-pahamarinana ny Olomasina ary handray zara mitovy; 13–15, Tokony hanana trano fitehirizan’ny eveka izy ireo ary handrindra ireo fananana araka ny lalàn’ny Tompo; 16–20, Ho toerana hiangonana mandritra ny fotoana fohy i Ohio.
1–2, Voatondro hatao any Missouri ny fihaonambe manaraka; 3–8, Natao ny fanendrena ireo loholona sasany izay hiara-dalana; 9–11, Tokony hampianatra izay efa nosoratan’ireo apôstôly sy mpaminany ny loholona; 12–21, Ireo nohazavain’ny Fanahy dia mamoa ny voan’ny fiderana sy ny fahendrena; 22–44, Notendrena ny loholona maromaro mba hitory ny filazantsara mandritra ny diany mankany Missouri hamonjy fihaonambe.
1–3, Ny antso sy ny fifidianana an’i Sidney Gilbert ao amin’ny Fiangonana dia ny hatokana ho loholona; 4–7, Tokony hitana ny toeran’ny mpandraharahan’ny eveka koa izy.
1–6, Tsy maintsy mitandrina ny fanekempihavanan’ny filazantsara ireo Olomasina mba hahazo famindram-po; 7–10, Tsy maintsy manam-paharetana ao amin’ny fahoriana izy ireo.
1–3, Voantso sy voafidy mba hatao batisa, hatokana ho loholona ary hitory ny filazantsara i William W. Phelps; 4, tokony hanoratra boky ho an’ireo ankizy ao amin’ny sekolin’ny Fiangonana izy; 5–6, Izy dia tokony handeha ho any Missouri izay ho toeram-piasany.
1–2, Tsy maintsy mitondra ny hazofijaliany ny Olomasina ary manaraka ny Tompo mba hahazo famonjena; 3–13, Ny Tompo no manome sy manafoana ny didy, ary roahina ny tsy mpankatò; 14–17, Lozan’ny mpanankarena izay tsy te hanampy ny mahantra ary lozan’ny mahantra izay tsy torotoro fo; 18–20, Sambatra ny mahantra izay madio am-po, fa izy no handova ny tany.
1–3, Independence, Missouri no toerana ho an’ny Tanànan’i Ziona sy ny tempoly; 4–7, Tokony hividy tany sy handray lova amin’io faritra io ny Olomasina; 8–16, Tokony hanangana tranombarotra iray i Sidney Gilbert, tokony ho mpanonta printy i William W. Phelps ary tokony hanomana rakitsoratra mba havoaka ho boky i Oliver Cowdery.
1–5, Ireo izay maharitra fahoriana dia hosatrohina voninahitra; 6–12, Tokony hiomana ho amin’ny fampakarambadin’ny Zanakondry sy ny fanasana hataon’ny Tompo ny Olomasina; 13–18, Mpitsara amin’i Isiraely ny eveka; 19–23, Tokony hankatò ny lalàn’ny tany ny Olomasina; 24–29, Tokony hampiasa ny safidiny hanaovana ny tsara ny olona; 30–33, Mandidy sy manafoana ny Tompo; 34–43, Tsy maintsy mibaboka sy mahafoy ny fahotany ny olona rehefa mibebaka; 44–58, Tokony hividy ny lovany ny Olomasina ary hiangona ao Missouri; 59–65, Tsy maintsy toriana amin’ny olona rehetra ny filazantsara.
1–4, Hotahina ireo Olomasina mahatoky ao Ziona; 5–8, Tokony ho tia sy hanompo ny Tompo izy ireo ary hitandrina ny didiny; 9–19, Tahina ara-nofo sy ara-panahy ny Olomasina amin’ny alalan’ny fitandremana ny andron’ny Tompo ho masina; 20–24, Ampanantenaina fiadanana eo amin’izao tontolo izao ary fiainana mandrakizay any amin’ny tontolo ho avy ny marina.
1–9, Tokony hitory ny filazantsara amin’ny fiangonan’ny olon-dratsy ireo loholona; 10–14, Tsy tokony holanilaniany foana ny fotoany na haleviny ny talentany; 15–17, Azony sasana ny tongony ho vavolombelona miampanga ireo izay mitsipaka ny filazantsara.
1–12, Efa nandidy famongorana maro teny ambonin’ny rano ny Tompo; 13–22, Nozonin’i Jaona ny rano ary mitety ny eo amboniny ny mpandringana; 23–29, Manana fahefana handidy ny rano ny sasany; 30–35, Tokony handeha tsiroaroa ny loholona ary hitory ny filazantsara; 36–39, Tokony hiomana ho amin’ny fiavian’ny Zanak’Olona izy ireo.
1–3, Voarakitra any an-danitra ny tenivavolombelona; 4–9, Ny loholona dia tokony handeha sy hitory araka ny fandanjalanjana ary araka ny fitarihan’ny Fanahy.
1–6, Ho avy amin’ny olon-dratsy ny andron’ny fisafoahana; 7–12, Tonga amin’ny alalan’ny finoana ireo famantarana; 13–19, Izay manitsakitsa-bady ao am-po dia handà ny finoana ary hatsipy any amin’ny farihy afo; 20, Handray lova amin’ny tany niova endrika ny mahatoky; 21, Tsy mbola nomena ny fitantarana feno ny zava-nitranga teo amin’ny Tendrombohitry ny Fiovan-tarehy; 22–23, Mandray ny misterin’ny fanjakan’ny mpankatò; 24–31, Tokony hovidiana ny lova ao Ziona; 32–35, Manapaka ny hisian’ny ady ny Tompo, ka mamono ny olon-dratsy ny olon-dratsy; 36–48, Hiangona ao Ziona ny Olomasina ary hanome ny vola hanorenana azy; 49–54, Azo antoka ho an’ny mahatoky ny fitahiana amin’ny Fiaviana Fanindroany, amin’ny Fitsanganana amin’ny maty ary mandritra ny Arivotaona; 55–58, Izao no andro fampitandremana; 59–66, Manonona foana ny anaran’ny Tompo ireo izay mampiasa izany tsy ombam-pahefana.
1–11, Didina mba hifamela ireo Olomasina fandrao hitoetra aminy ny fahotana lehibe kokoa; 12–22, Tokony hoentina eo anoloan’ny Fiangonana ny tsy mibebaka; 23–25, Izay mandoa ny fahafolonkarena dia tsy hodorana amin’ny fiavian’ny Tompo; 26–32, Ampitandremana amin’ny trosa ny Olomasina; 33–36, Hoesorina hiala ao i Ziona ny mpikomy; 37–40, Hitsara ireo firenena ny Fiangonana; 41–43, Hiroborobo i Ziona.
1–2, Nankinina tamin’olona teto an-tany ny fanalahidin’ny fanjakan’ Andriamanitra ary handresy ny tombontsoan’ny filazantsara; 3–6, Ho avy ny fanjakan’ny lanitry ny arivotaona ary hikambana amin’ny fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany.
1–4, Ny fanekempihavanana maharitra mandrakizay no fahafenoan’ny filazantsara; 5–8, Tokony hitory, hijoro ho vavolombelona ary hifandahatra amin’ny olona ireo loholona; 9–13, Ahazoana antoka ny fandovana ny fiainana mandrakizay ny asa fanompoana mahatoky.
1–3, Mandre ny vavaka sy miambina an’ireo loholony ny Tompo; 4–9, Manao fanamby amin’ny olona hendry indrindra Izy mba haka tahaka ny kely indrindra amin’ireo fanambarany; 10–14, Hovelomin’ny Fanahy ireo loholona mahatoky ary hahita ny tavan’ Andriamanitra.
1–5, Manjary soratra masina ny tenin’ireo loholona rehefa entanin’ny Fanahy Masina izy; 6–12, Tokony hitory sy hanao batisa ireo loholona ary hanaraka ireo tena mpino ny famantarana; 13–24, Ny lahimatoa amin’ireo zanakalahin’i Aharôna dia afaka manompo toy ny Eveka Mpiahy (izany hoe, mitana ny fanalahidin’ny fiadidiana amin’ny maha-eveka azy) eo ambany fitarihan’ny Fiadidiana Voalohany; 25–28, Didina ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany ny filazantsara; 29–35, Ny Olomasina dia tokony hitandrina ny Sabata, hazoto miasa ary hivavaka.
1–2, Tokony hiaraka amin’i Oliver Cowdery ho any Missouri i John Whitmer; 3–8, Tokony hitory sy hanangona, hirakitra sy hanoratra ireo toe-javatra ara-tantara koa izy.
1–5, Notendrena ireo mpitantan-draharaha mba hamoaka ireo fanambarana; 6–13, Ireo izay miasa ao amin’ny zava-panahy dia mendrika ny karamany; 14–18, Tokony hitovy ny Olomasina eo amin’ny zavatr’izao fiainana izao.
1–4, Irahina hanambara ny filazantsara i Joseph Smith sy i Sidney Rigdon; 5–11, Hatao mangaihay ireo fahavalon’ny Olomasina.
1–8, Tokony hanao tatitra amin’ny eveka momba ny fintantanan-draharahany ireo loholona; 9–15, Ny eveka no mitantana ny trano fitehirizana ary miahy ny mahantra sy ny sahirana; 16–26, Tokony hohamarinin’ny eveka ny fahamendrehan’ireo loholona.
1–2, Tokony hanohy ny fitoriana ireo loholona; 3–6, Tokony hanohy ny fandikana ny Baiboly mandra-pahavitany i Joseph Smith sy i Sidney Rigdon.
1–5, Notaomin’i Paoly ny Fiangonana tamin’ny androny tsy hitandrina ny lalàn’i Mosesy; 6–7, Masina sy voadio amin’ny alalan’ny sorompanavotana ny ankizy madinika.
1–5, Hahazo ny fiainana mandrakizay ireo loholona mahatoky izay mitory ny filazantsara; 6–12, Mivavaha mba handray ny Mpampionona izay mampianatra ny zava-drehetra; 13–22, Ireo loholona dia hipetraka hitsara ireo izay mandà ny hafany; 23–36, Tokony hahazo fanampiana amin’ny Fiangonana ny fianakavian’ireo misiônera.
1–4, Ny fananan’ny biby fanahy sy ny honenany ao amin’ny fahasambarana mandrakizay; 5–7, Efa 7000 taona ny taom-piainan’ity tany ity; 8–10, Famerenan’ireo anjely samihafa indray ny filazantsara sy ny fanompoana eto an-tany; 11, Ny fanisiana tombo-kase an’ireo 144000; 12–14, Ho avy i Kristy any amin’ny fiandohan’ny arivo taona fahafito; 15, Hatsangana ireo mpaminany roa ho an’ny firenena Jiosy.
1–4, Tokony hanangana sy hanorina trano fitehirizana ny Olomasina; 5–12, Ny fampiasany ny fananany amim-pahendrena dia hitondra azy any amin’ny famonjena; 13–14, Tokony tsy hiankina amin’ireo fahefana eto an-tany ny Fiangonana; 15–16, Nanompo teo ambany fahefan’ny Iray Masina (i Kristy) i Mikaela (i Adama); 17–22, Sambatra ny mahatoky fa izy no handova ny zava-drehetra.
1–4, Nantsoin’ny Mpampionona i Jared Carter mba hitory ny filazantsara.
1–5, Nantsoina i Stephen Burnett sy i Eden Smith hitory amin’ny toerana rehetra nofinidin’izy ireo.
1–2, Hazonin’ny Fiadidiana Voalohany mandrakariva ireo fanalahidin’ny fanjakana; 3–7, Raha mahatoky amin’ny asa fanompoany i Frederick G. Williams dia hanana ny fiainana mandrakizay.
1–4, Be ny hotakiana amin’izay nomena be; 5–7, Manjaka eo amin’izao tontolo izao ny haizina; 8–13, Voafatotra ny Tompo rehefa ataontsika izay lazainy; 14–18, Tsy maintsy mitombo ao amin’ny hatsarana sy ny fahamasinana i Ziona; 19–24, Tokony hokatsahin’ny olona tsirairay ny tombontsoan’ny namany.
1–4, Fananan’ny vehivavy sy ny ankizy zo hahazo fanohanana avy amin’ny vadiny sy ny rainy; 5–6, Fananan’ny mananotena sy ny kamboty zo hahazo fanohanana avy amin’ny Fiangonana.
1–5, Haorina any Missouri ilay Jerosalema Vaovao sy ny Tempoly; 6–17, Fanomezana ny fitohizan’ny fisoronana, hatramin’i Mosesy ka hatramin’i Adama; 18–25, Ny fihazonan’ny fisoronana ambony ny fanalahidin’ny fahalalana an’ Andriamanitra; 26–32, Ny fihazonan’ny fisoronana ambany ny fanalahidin’ny asa fanompoan’ny anjely sy ny an’ny filazantsara fiomanana; 33–44, Ny fahazoan’ny olona ny fiainana mandrakizay amin’ny alalan’ny fianianana sy ny fanekempihavanan’ny fisoronana; 45–53, Fanazavan’ny Fanahin’i Kristy ny olona sy ny fitoeran’izao tontolo izao ao amin’ny fahotana; 54–61, Tsy maintsy mijoro ho vavolombelon’ireo zavatra izay efa noraisiny ireo ny Olomasina; 62–76, Tokony hotoriany ny filazantsara dia hanaraka ireo famantarana; 77–91, Tokony handeha hitory, tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy ireo loholona ary ny Tompo no hamatsy izay ilainy; 92–97, Miandry ireo izay mitsipaka ny filazantsara ny areti-mandringana sy ny ozona; 98–102, Fanomezana ny hira vaovao momba ny fanavotana an’i Ziona; 103–110, Aoka ny olona tsirairay hanefa ny anjara fanompoany sy hifofotra amin’ny antso ananany; 111–120, Tokony hitory ny fahavetavetan’ny fandravana amin’ny andro farany ireo mpanompon’ny Tompo.
1–5, Raisina amin’ny alalan’ny fanokanana fananana ny lova ao Ziona; 6–12, Ilay mahery sy matanjaka no hanome ny Olomasina ny lovany ao Ziona.
1–7, Fanomezan’ny Tompo ny hevitry ny fanoharana momba ny vary sy ny tsimparifary; 8–11, Nohazavainy ny fitahian’ny fisoronana ho an’ireo izay mpandova ara-dalàna araka ny nofo.
1–4, Voalaza mialoha ny hisian’ny ady eo amin’ireo Faritany Tavaratra sy ireo Faritany Tatsimo; 5–8, Antambo lehibe no hanjo ny mponina rehetra eto an-tany.
1–5, Mandray ny Mpampionona izay fampanantenana ny fiainana mandrakizay ny Olomasina mahatoky; 6–13, Voara-maso sy voafehin’ny fahazavan’i Kristy ny zava-drehetra; 14–16, Ny fahatongavan’ny Fitsanganana amin’ny maty amin’ny alalan’ny Fanavotana; 17–31, Ny fankatoavana ny lalàna selestialy, terestrialy na telestialy dia manomana ny olona ho amin’ireo fanjakana sy voninahitra tsirairay avy ireo; 32–35, Ireo izay te hitoetra ao amin’ny fahotana dia mbola mijanona ho maloto; 36–41, Ny fanjakana rehetra dia entina amin’ny lalàna; 42–45, Efa nomen’ Andriamanitra ny lalàna ho an’ny zava-drehetra; 46–50, Ho takatry ny olona na dia Andriamanitra aza; 51–61, Ny fanoharana ny amin’ilay lehilahy izay mandefa ny mpanompony ho any an-tsaha sy ny fisafoany ny tsirairay avy taminy; 62–73, Manakaikeza ny Tompo ianareo dia hahita ny tavany; 74–80, Manamasina ny tenanareo ary mifampianara ny fotopampianaran’ny fanjakana; 81–85, Ny olona tsirairay izay efa nampitandremana dia tokony hampitandrina ny namany; 86–94, Famantarana, fikorontanan’ny singa, ary anjely no manomana ny lalana ho amin’ny fiavian’ny Tompo; 95–102, Fiantsoan’ny trompetran’ny anjely ny maty araka ny fandaminany; 103–116, Filazan’ny trompetran’ny anjely ny famerenana ny filazantsara ho amin’ny laoniny, ny fianjeran’i Babylona ary ny adin’ilay Andriamanitra lehibe; 117–126, Katsaho ny fianarana, aoreno ny tranon’ Andriamanitra (ny tempoly) ary atafio ny tenanareo ny famatoran’ny fiantrana; 127–141, Fanazavana ny amin’ny lamin’ny Sekolin’ny Mpaminany ka ao anatin’izany ny ôrdônansin’ny fanasan-tongotra.
1–9, Voarara ny fampiasana divay, ny zavapisotro mahery, ny paraky sy ny sigara ary ny zavapisotro mahamay; 10–17, Voatendry hampiasain’ny olona sy ny biby ny zavamaniry, ny voankazo sy ny hena ary voan-javamaniry; 18–21, Ny fankatoavana ny lalàn’ny filazantsara, anisan’izany ny Tenin’ny Fahendrena, dia mitondra fitahiana ara-nofo sy ara-panahy.
1–5, Ny fanalahidin’ny fanjakana dia natolotra an’i Joseph Smith ary natolotra ny Fiangonana tamin’ny alalany; 6–7, Tokony hanompo ao amin’ny Fiadidiana Voalohany i Sidney Rigdon sy i Frederick G. Williams; 8–11, Ny filazantsara dia hotoriana amin’ireo firenen’i Isiraely, amin’ny Jentilisa ary amin’ny Jiosy, ka samy handre amin’ny fiteniny avy ny olona tsirairay; 12–18, Tsy maintsy manao ny fandaminana ny Fiangonana i Joseph Smith sy ireo mpanolotsainy; 19–37, Nanarin’ny Tompo ireo olona samihafa mba handeha araka ny hitsiny ary hanompo ao amin’ny fanjakany.
1–3, Ny ankabeazan’ny Apôkrifa dia voadika araka ny hitsiny saingy mirakitra soratra mifangaro izay sady nataon’ny tanan’olombelona no tsy marina; 4–6, Mitondra soa izy ho an’ireo izay hazavain’ny Fanahy.
1–2, Fanomezan’ny Tompo didy momba ny fandraisana ao amin’ny lamina miray.
1–5, Ireo rehetra izay mahatoky dia hahita ny Tompo; 6–18, Vavolombelona nanambara i Jaona fa ny Zanak’ Andriamanitra dia nitombo tao amin’ny fahasoavana niampy fahasoavana ambara-pandraisany ny fahafenoan’ny voninahitry ny Ray; 19–20, Ireo olona mahatoky izay mitombo ao amin’ny fahasoavana miampy fahasoavana dia handray koa amin’ny fahafenoany; 21–22, Ireo izay ateraka amin’ny alalan’i Kristy no Fiangonan’ny Lahimatoa; 23–28, Nandray ny fahafenoan’ny fahamarinana rehetra i Kristy, ary afaka manao toy izany ny olona amin’ny alalan’ny fankatoavana; 29–32, Niaraka tamin’ Andriamanitra ny olona tany am-piandohana; 33–35, Ny singa dia maharitra mandrakizay ary afaka handray ny fahafenoan’ny fifaliana ny olona amin’ny Fitsanganana amin’ny maty; 36–37, Ny voninahitr’ Andriamanitra dia faharanitan-tsaina; 38–40, Tsy manan-tsiny eo anoloan’ Andriamanitra ny ankizy noho ny fanavotan’i Kristy; 41–53, Fandidiana ireo rahalahy mpitarika handaminany ny fianakaviany.
1–9, Fanomezan’ny Tompo ny didy momba ny fananganana ny trano ho an’ny asan’ny Fiadidiana; 10–12, Tokony haorina ny trano printy; 13–17, Voatendry ny lova sasantsasany.
1–6, Nanarina ireo Olomasina satria tsy nahavita ny tranon’ny Tompo; 7–10, Ny fanirian’ny Tompo dia ny hampiasana ny tranony hanafiana ny olony amin’ny hery avy any ambony; 11–17, Atokana ho toerana fiderana sy ho sekolin’ny Apôstôly ny trano.
1, Hohamafisina ny tsatòkan’i Ziona ao Kirtland; 2–5, Fizaran’ny eveka ny lova ho an’ireo Olomasina; 6–9, Tokony ho mpikambana ao amin’ny lamina miray i John Johnson.
1–2, Fitahiana ny ankamaroan’ny Olomasin’i Ziona (Fivondronan’i Jackson, Missouri) noho ny fahatokiany; 3–5, Fankasitrahana an’i Parley P. Pratt noho ny asany tao amin’ny sekolin’i Ziona; 6–9, Ireo izay mitandrina ny fanekempihavanany no eken’ny Tompo; 10–17, Haorina ao i Ziona ny trano izay hahitan’ny madio am-po an’ Andriamanitra; 18–21, Ireo izay madio am-po no Ziona; 22–28, Ho afa-mandositra ny famaizan’ny Tompo i Ziona raha mahatoky.
1–3, Ho tombontsoan’ny Olomasina ny fahoriany; 4–8, Tokony hanohana ny lalam-panorenan’ny firenena ny Olomasina; 9–10, Ny olona marina, hendry ary tsara dia tokony hotohanana hanana toerana ao amin’ny fitantanana ny firenena; 11–15, Ireo manolotra ny ainy noho ny amin’ny Tompo no hahazo ny fiainana mandrakizay; 16–18, Lavo ny ady ary torio ny fandriampahalemana; 19–22, Nanarina ny Olomasina tao Kirtland ary nodidina hibebaka; 23–32, Fanambaran’ny Tompo ny lalàny momba ny fanenjehana sy ny fahoriana nahatra tamin’ny olony; 33–38, Azo ekena ny ady rehefa ny Tompo ihany no mandidy izany; 39–48, Ny Olomasina dia tokony hamela ny fahavalony izay ho afa-mandositra ny famalian’ny Tompo koa raha mibebaka.
1–8, Voantso hitory ny filazantsara i John Murdock, ary ireo izay nandray azy dia mandray ny Tompo ary hahazo famindram-po.
1–4, Tokony hitory ny filazantsara ho famonjena ny olona i Joseph sy i Sidney; 5–8, Homena azy ireo amin’izany ora izany indrindra izay tokony holazainy; 9–12, Sidney no ho mpitondrateny ary i Joseph no ho mpanambara sady ho mahery amin’ny tenivavolombelona; 13–17, Hanangana vahoaka madio ny Tompo ary ny mpankatò dia hovonjena.
1–8, Nofaizina sy nampahoriana ny Olomasina noho ny fandikany ny lalàna; 9–15, Hianjera amin’ireo firenena ny fahaviniran’ny Tompo, saingy hangonina sy hampaherezina kosa ny vahoakany; 16–21, Hatsangana i Ziona sy ireo tsatòkany; 22–31, Fampisehoana ny ho toetry ny fiainana mandritra ny Arivotaona; 32–42, Hotahina ary hovaliana soa ny Olomasina amin’izany; 43–62, Ny fanoharana momba ny andriandahy sy ireo hazo oliva izay maneho ireo korontana sy fanavotana an’i Ziona amin’ny farany; 63–75, Tokony hotohizan’ny Olomasina ny fiarahany mivondrona; 76–80, Ny Tompo no nanao ny Lalàm-panorenan’i Etazonia; 81–101, Tsy maintsy mitambezo ny Olomasina mba hanarenana ireo fahavoazana, araka ny fanoharana ny amin’ilay vehivavy sy ilay mpitsara tsy marina.
1–8, Voatendry ny filankevitra avo mba handamin’ny ireo fahasahiranana lehibe izay mipoitra ao amin’ny Fiangonana; 9–18, Fanomezana ireo fombafomba hoenti-mitsara; 19–23, Ny filohan’ny filankevitra no mandray ny fanapahan-kevitra; 24–34, Hazavaina ny fangatahana fitsarana ambony.
1–4, Nahoana no navelan’ny Tompo henjehina ireo Olomasina tao amin’ny Fivondronan’i Jackson; 5–10, Handresy ny Olomasina raha mitandrina ny didy; 11–20, Ho tonga amin-kery ny fanavotana an’i Ziona, ary ny Tompo no handeha eo anoloan’ny vahoakany; 21–28, Hivondrona ao i Ziona ny Olomasina, ary ireo izay mahafoy ny ainy dia hahazo izany indray; 29–40, Voantso ireo rahalahy samihafa mba hanangana ny Tobin’i Ziona sy handeha any Ziona; ampanantenaina fandresena izy ireo raha mahatoky.
1–10, Ho voaozona ny Olomasina izay mandika ny lalàn’ny lamina miray; 11–16, Mamatsy ny Olomasiny araka ny fombany ny Tompo; 17–18, Mifehy ny fikarakarana ny mahantra ny lalàn’ny filazantsara; 19–46, Fanendrena ny fitantanan-draharaha sy ny fitahiana ho an’ireo rahalahy samihafa; 47–53, Tokony hisaraka ny fiasan’ny lamina miray ao Kirtland sy ny lamina ao i Ziona; 54–66, Atao ho fanontana ny soratra masina ny tahiry masin’ny Tompo; 67–77, Ny tahiry ankapoben’ny lamina miray dia hampiasaina araka ny faneken’ny rehetra; 78–86, Ireo izay ao amin’ny lamina miray dia tokony handoa ny trosany rehetra, ary ny Tompo no hanafaka azy ireo amin’ny famatorana ara-bola.
1–5, Ziona dia haorina amin’ny fanarahana ny lalàna selestialy; 6–13, Ahemotra mandritra ny fotoana fohy ny fanavotana an’i Ziona; 14–19, Ny Tompo no hiady ny adin’i Ziona; 20–26, Tokony ho hendry ka tsy hirehareha ny amin’ny asa mahagaga ny Olomasina rehefa mivory; 27–30, Tokony hovidina ny tany ao Jackson sy amin’ireo fivondronana manodidina; 31–34, Ireo loholona dia tokony handray ny fanafiana masina ao an-tranon’ny Tompo ao Kirtland; 35–37, Ireo Olomasina izay sady voantso no voafidy dia hohamasinina; 38–41, Tokony hanangana ny fanevan’ny fandriampahalemana ho amin’izao tontolo izao ny Olomasina.
1–3, Voantso ho mpitarika mpiahy eo an-toerana i Warren A. Cowdery; 4–5, Tsy hanampoka ny zanaky ny hazavana toy ny mpangalatra ny Fiaviana Fanindroany; 6–8, Fitahiana lehibe no manaraka ny fanompoana mahatoky ao amin’ny Fiangonana.
1–6, Misy fisoronana roa: ny Fisoronana Melkizedeka sy ny Fisoronana Aharôna; 7–12, Ireo izay mihazona ny Fisoronana Melkizedeka dia manana fahefana hitondra amin’ny anjara fanompoana rehetra ao amin’ny Fiangonana; 13–17, Ny episkôpà no miahy ny Fisoronana Aharôna izay mitondra ny ôrdônansy ivelany; 18–20, Ny Fisoronana Melkizedeka no mihazona ny fanalahidin’ny fitahiana ara-panahy rehetra; ny Fisoronana Aharôna no mihazona ny fanalahidin’ny fanompoan’ny anjely; 21–38, Ny Fiadidiana Voalohany, ny Roambinifololahy ary ny Fitopololahy no antsoina hoe: kôlejy miahy ka raisiny ao anatin’ny firaisan-kina sy ny fahamarinana ny fanampahan-keviny; 39–52, Voaorina hatramin’i Adama ka hatreo amin’i Noa ny lamin’ny patriarka; 53–57, Niangona tao Adama-ondia-Amàna ireo Olomasina fahiny ary niseho taminy ny Tompo; 58–67, Tokony handamin’ny ny mpitondra ao amin’ny Fiangonana ny Roambinifololahy; 68–76, Manompo toy ny mpitsara tsotra amin’i Isiraely ny eveka; 77–84, Ny Fiadidiana Voalohany sy ny Roambinifololahy no fitsarana avo indrindra ao amin’ny Fiangonana; 85–100, Samy mitondra ny kôlejiny avy ireo filohan’ny Fisoronana.
1–3, Voavela ny fahotan’i Lyman Sherman; 4–5, Hisaina miaraka amin’ireo loholona mpitarika ao amin’ny Fiangonana izy; 6–8, Voantso izy hitory ny filazantsara sy hampahery ny rahalahiny.
1–5, Naorina mba ho toerana hotsidihin’ny Zanak’Olona ny Tempolin’i Kirtland; 6–21, Izany dia ho tranon’ny vavaka, ny fifadiankanina, ny finoana, ny fianarana, ny voninahitra sy ny filaminana, ary ho tranon’ Andriamanitra; 22–33, Enga anie hangaihay ny tsy mibebaka izay manohitra ny vahoakan’ny Tompo; 34–42, Enga anie hivoaka amin-kery ny Olomasina ka hanangona ny marina ho ao Ziona; 43–53, Enga anie ny Olomasina ho afaka amin’ny zavatra mahatahotra izay haidina amin’ny olon-dratsy amin’ny andro farany; 54–58, Enga anie ireo firenena sy vahoaka ary fiangonana ho voaomana ho amin’ny filazantsara; 59–67, Enga anie ny Jiosy, ny Lamanita ary ny Isiraely manontolo ka ho voavotra; 68–80, Enga anie ny Olomasina ka hosatrohina voninahitra sy laza ary hahazo ny famonjena mandrakizay.
1–10, Niseho tamin’ny voninahitra i Jehovah Tompo ary nanaiky ny Tempolin’i Kirtland ho tranony; 11–12, Samy niseho tsirairay i Mosesy sy i Elià ary nanolotra ny fanalahidiny sy ny fotoampitantanany; 13–16, Niverina i Elia ary nanolotra ny fanalahidin’ny fotoampitantanany araka ny nampanantenan’i Malakia.
1–5, Ny Tompo no mikarakara izay ilain’ireo mpanompony eo amin’ny fiainany; 6–11, Hitondra an’i Ziona amin’ny famindram-po Izy ary handrindra ny zava-drehetra ho tombontsoan’ireo mpanompony.
1–10, Ny Roambinifololahy dia tokony handefa ny filazantsara sy hanandratra ny feon’ny fampitandremana amin’ny firenena sy ny vahoaka rehetra; 11–15, Tokony hitondra ny hazofijaliany izy ireo ary hanaraka an’i Jesoa Kristy sy hamahana ny ondriny; 16–20, Ireo izay mandray ny Fiadidiana Voalohany dia mandray ny Tompo; 21–29, Mandrakotra ny tany ny haizina ary ireo izay mino sy hatao batisa ihany no hovonjena; 30–34, Ny Fiadidiana Voalohany sy ny Roambinifololahy no mihazona ireo fanalahidin’ny fitantanan’ny fotoam-pahafenoana.
1–6, Fampahafantarana ny vatan’i Jese, ny solofo mitsimoka avy ao ary ny fakan’i Jese; 7–10, Ireo sisa tavela amin’i Ziona naely dia manana zo amin’ny fisoronana ary antsoina hiverina amin’ny Tompo.
1–2, Ireo andraikitra ao am-piangonana notanan’ireo izay tsy mahatoky dia homena ny hafa.
1–4, Nataon’ny Tompo hoe Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany ny Fiangonany; 5–6, Toerana sy fialofana ho an’ny Olomasina i Ziona sy ireo tsatòkany; 7–16, Nodidina ny Olomasina hanangana ny tranon’ny Tompo tao Far West; 17–19, Joseph Smith no mihazona ireo fanalahidin’ny fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany.
1–9, Tsy tokony hitsiriritra ny zavatr’izao fiainana izao ireo mpanompon’ny Tompo, fa “inona moa ny fananana amin’ny Tompo?”; 10–16, Tokony hahafoy ny fahakelezan’ny fanahiny izy ireo, dia ho masina amin’ny Tompo ny fahafoizan-tenany.
1–3, Ny Tompo no hamatsy ireo fianakavian’ny Roambinifololahy; 4–6, Nofenoina ny fahabangana teo anivon’ny Roambinifololahy.
1–5, Ny Olomasina dia tokony handoa ny ambim-pananany ary rehefa izany dia hanome ny iray ampahafolon’izay miditra aminy isan-taona ho fahafolonkarena; 6–7, Ny fomba toy izany dia hanamasina ny tanin’i Ziona.
1–6, Nitalaho tamin’ny Tompo ny Mpaminany noho ny fijalian’ny Olomasina; 7–10, Nilaza fiadanana taminy ny Tompo; 11–17, Voaozona avokoa ireo izay miampanga lainga ny vahoakan’ny Tompo ho mpandika lalàna; 18–25, Tsy hanana zo amin’ny fisoronana izy ireo ary ho voaheloka; 26–32, Ampanantenaina fanambarana be voninahitra ireo miaritra amin-kerim-po; 33–40, Ny antony iantsoana maro ary ifidianana vitsy; 41–46, Tsy tokony hampiasaina afa-tsy amin’ny fahamarinana ny fisoronana.
1–4, Hamotopototra ny momba ny anaran’i Joseph Smith ireo faran’ny tany; 5–7, Ny loza rehetra manjo azy sy ny fitsembohany dia hanome azy fahaiza-manao, ary ho soa ho azy izany; 8–9, Efa nidina tambanin’izany rehetra izany ny Zanak’Olona.
1–6, Tokony hanangona ary hamoaka ho boky ny fitantarana ny fijaliana sy ny fanenjehana azy ireo ny Olomasina; 7–10, Ilay fanahy iray ihany izay nanorina finoana sandoka no nitarika koa ny fanenjahana ireo Olomasina; 11–17, Olona maro amin’ireo antokom-pivavahana rehetra no mbola handray ny fahamarinana.
1–14, Nodidina i Joseph Smith hanao fanambarana marina ny amin’ny filazantsara tamin’ny filohan’i Etazonia sy ireo governora ary ireo mpitondra ny firenen-drehetra; 15–21, Tahina i Hyrum Smith, i David W. Patten, i Joseph Smith rainy ary ireo hafa anivon’ny velona sy ny maty, noho ny fahitsiany sy ny hatsaram-panahiny; 22–28, Nodidina hanangana trano fandraisam-bahiny sy tempoly iray tao Nauvoo ny Olomasina; 29–36, Tokony hatao any amin’ireo tempoly ny batisa ho an’ny maty; 37–44, Manorina tempoly mandrakariva ny vahoakan’ny Tompo ho fanatanterahana ireo ôrdônansy masina; 45–55, Afahana amin’ny didy hanorina ny tempoly ao amin’ny Fivondronan’i Jackson ny Olomasina, noho ny famoretan’ny fahavalony; 56–83, Nomena ireo toromarika ho fanorenana ny Tranon’i Nauvoo; 84–96, Hyrum Smith dia nantsoina ho patriarika sy handray ireo fanalahidy ary hitana ny toeran’i Oliver Cowdery; 97–122, Notoroana hevitra tamin’ny asany i William Law sy ireo hafa; 123–145, Notendrena ireo manampahefana Ambony sy eo an-toerana mbamin’ny andraikiny sy ny kôlejy hisy azy avy.
1–4, Tokony hanorina tanàna ireo Olomasina ary hivondrona any amin’ireo tsatòkan’i Ziona.
1–3, Nomena sitraka i Brigham Young noho ny asany ary afaka tamin’ny fandehanana hatrizay any ivelany.
1–4, Nirehareha ny amin’ny fanenjehana sy ny fahoriana i Joseph Smith; 5–12, Tsy maintsy tanana ireo rakitsoratra momba ny batisa ho an’ny maty.
1–5, Ireo mpitamboky eo an-toerana sy mpitamboky tompotoerana dia tsy maintsy vavolombelona manamarina ireo fanaovana batisa ho an’ny maty; 6–9, Manan-kery ny firaketan’izy ireo ary raketina eto an-tany sy any an-danitra izany; 10–14, Ny batistera dia tandindon’ny fasana; 15–17, Elia no namerina indray ny fahefana momba ny batisa ho an’ny maty; 18–21, Efa naverina avokoa ireo fanalahidy, hery ary fahefan’ny fotoampitantanana lasa; 22–25, Vaovao mahafaly sy be voninahitra ho an’ny velona sy ny maty no ambara.
1–3, Samy misy any an-danitra na ireo vatana natsangana tamin’ny maty na ireo vatan’ny fanahy; 4–9, Nomena ireo fanalahidy izay ahazoana mamantatra ireo iraka avy any ankoatra ny voaly.
1–3, Mety hiseho manokana amin’ny olona ny Ray sy ny Zanaka; 4–7, Mitoetra any amin’ny tontolo selestialy ny anjely; 8–9, Ny tany selestialy dia ho Orima sy Tomima lehibe; 10–11, Omena vato fotsy ireo rehetra izay miditra ny tontolo selestialy; 12–17, Ny fotoan’ny Fiaviana Fanindroany dia notanana tsy ho fantatry ny Mpaminany; 18–19, Ny faharanitan-tsaina azontsika teo amin’izao fiainana izao dia hiara-hitsangana amintsika amin’ny Fitsanganana amin’ny maty; 20–21, Ny fitahiana rehetra dia avy amin’ny fankatoavana ny lalàna; 22–23, Manana vatana nofo sy taolana ny Ray sy ny Zanaka.
1–4, Ny fanambadiana selestialy no fototry ny fisandratana ao amin’ny lanitra avo indrindra; 5–6, Hazavaina ny fomba ifehezana ny olona ho amin’ny fiainana mandrakizay; 7–8, Ny fanahy rehetra dia singan-javatra.
1–6, Azo amin’ny alalan’ny fanekempihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay ny fisandratana; 7–14, Soritsoritana ireo teny sy fepetran’ilay fanekempihavanana; 15–20, ny fanambadiana selestialy sy ny fanohizana ny firaisan’ny fianakaviana dia hahatonga ny olona ho andriamanitra; 21–25, Ny lalana ety sy tery dia mitondra mankamin’ireo fiainana mandrakizay; 26–27, Omena ny lalàna mikasika ny fanevatevana ny Fanahy Masina; 28–39, Atao amin’ireo mpaminany sy Olomasina amin’ny vanim-potoana rehetra ireo fampanantenana ny hitombo mandrakizay sy ny hisandratra; 40–47, Omena an’i Joseph Smith ny fahefana hamatotra sy hifehy ety an-tany sy any an-danitra; 48–50, Fehezin’ny Tompo eo amboniny ny fisandratany; 51–57, Nanarina i Emma Smith mba ho mahatoky sy marina; 58–66, Soritsoritana ireo lalàna momba ny fampakarana vady maro.
1–6, Didina ireo Olomasina hiomana ho amin’ny Fiaviana Fanindroany; 7–16, Didina ny olona rehetra handositra an’i Babylona, ho tonga ao Ziona ary hiomana ho amin’ny andro lehiben’ny Tompo; 17–35, Hitsangana eo an-tendrombohitr’i Ziona Izy, hanjary tany tokana ireo kontinenta ary hiverina ireo foko very amin’i Isiraely; 36–40, Ny filazantsara dia naverina indray tamin’ny alalan’i Joseph Smith mba hotorina manerana izao tontolo izao; 41–51, Hidina hamaly ny olon-dratsy ny Tompo; 52–56, Izany dia ho taonan’ny navotany; 57–74, Havoaka ny filazantsara mba hamonjy ireo Olomasina sy ho famongorana ny olon-dratsy.
1–4, Tokony harovan’ny governemanta ny fahalalahan’ny eritreritra sy ny fivavahana; 5–8, Ny olon-drehetra dia tokony hanohana ny governemantany ary haneho fanajana sy fankatoavana ny lalàna; 9–10, Ireo fikambanam-pivavahana dia tsy tokony hanana fahefam-panjakana; 11–12, Manana ny rariny ny olona miaro ny tenany sy ny fananany.
1–2, Maty maritiora tao amin’ny fonjan’i Carthage i Joseph sy i Hyrum; 3, Ambara fa manan-tombo ny toeran’ny Mpaminany; 4–7, Ny ra tsy manan-tsinin’izy ireo dia vavolombelona manambara ny fahamarinana sy ny maha-avy amin’ Andriamanitra ny asa.
1–16, Hazavaina ny fomba handaminana ny tobin’i Isiraely amin’ny diany miankandrefana; 17–27, Didina ireo Olomasina hiaina araka ireo fitsipika maro ao amin’ny filazantsara; 28–33, Tokony hihira, handihy, hivavaka ary hianatra fahendrena ireo Olomasina; 34–42, Voavono ireo mpaminany mba ho azo omem-boninahitra ary koa mba ho azo helohina ny olon-dratsy.
1–6, Hitan’ny Mpaminany ao amin’ny fanjakana selestialy i Alvin rahalahiny; 7–9, Ambara ny fotopampianarana momba ny famonjena ny maty; 10, Voavonjy ao amin’ny fanjakana selestialy ny ankizy rehetra.
1–10, Nisaintsaina ny asa soratr’i Petera sy ny famangian’ny Tompontsika ny tontolon’ny fanahy ny Filoha Joseph F. Smith; 11–24, Hitan’ny Filoha Smith ny nivorian’ireo olo-marina nodimandry tao amin’ny paradisa sy ny nampianaran’i Kristy azy ireo; 25–37, Hitany ny fomba nandaminana ny fitoriana ny filazantsara teo anivon’ireo fanahy; 38–52, Hitany tao amin’ny tontolon’ny fanahy i Adama, i Eva ary ny maro tamin’ireo mpaminany masina izay nihevitra ny toetry ny fanahiny alohan’ny fitsanganana amin’ny maty ho toy ny fatorana; 53–60, Ny marina nodimandry amin’izao andro izao dia manohy ny asany ao amin’ny tontolon’ny fanahy.